Navoaka ny famaritana vaovao momba ny Oppo Find X2 Androidsis
Oppo Find X2: ity no lazain'ny famoahana vaovao sy lehibe momba ny finday
Miparitaka hatrany ny antsipiriany misimisy momba ny finday avo lenta Oppo Find X2. Amin'ity fotoana vaovao ity dia miresaka momba ny roa amin'ireo fakantsary fakan-tsarimihetsika izay hipetrahan'ilay fitaovana izahay, ary koa ny toetra hafa sy ny pitsopitsony teknika voalaza ao amin'ilay tatitra.
Raha ny filazan'ny mpanangom-baovao sinoa nanolo-tena hikaroka ny sasany amin'ireo kalitao amin'ity finday manaraka ity, Oppo dia niara-namorona ny sary sensor IMX689 ho an'ny Oppo Find X2 miaraka amin'i Sony. Ity mpitifitra ity dia voalaza fa voalohany amin'ny karazany miaraka amin'ny teknolojia mifantoka omni-directional pixel. Izy io dia lens 48-megapixel miaraka amin'ny haben'ny sensor 1 / 1.3-inch, ary tena mahaliana fa lehibe kokoa noho ny haben'ny sensor 1 / 1.75 an'ny solomaso Sony IMX600. Huawei Mate 30 Pro.
Ny sensor 689MP Sony IMX48 dia antenaina ihany koa fa ho solomaso voalohany amin'ny fanamboarana fakan-tsary triple aoriana ao amin'ny Find X2. Hiaraka amin'ny a Sony IMX708 ary solomaso telephoto 13 MP miaraka amina fanohanana zoom optika 5x. Ny Sony IMX708, izay hisantatra ny laharana voalohany amin'ny Find X2, dia voalaza ihany koa fa ho masolavitra zoro "matanjaka" indrindra. Nanampy ihany koa ilay mpanolotsaina fa, eo aloha, ny Find X2 dia hanana fakantsary selfie 616-megapixel Sony IMX32.
Ny Oppo Find X2, ho fanampin'izany, dia mikasa ny ho tonga miaraka a asehoy miaraka amin'ny fanohanan'ny vahaolana QuadHD + 1,440 x 3,168 teboka ary taham-pahavitrihana 120 Hz. Ny tatitra teo aloha dia nanambara fa mirehareha paiso diagonaly 6.5 santimetatra sy mahia kely izy io. Ny curvature an'ny efijery finday dia 80 °.
Ankoatr'izay, ny famoahana koa dia manambara izany Ny Find X2 dia ho tonga miaraka amin'ny chip MEMC, izay hita ankehitriny amin'ny fahitalavitra avo lenta. Misaotra an'ity singa ity, ny fitaovana dia antenaina hanolotra mari-pahaizana tanteraka loko 0.8. Ny fampisehoana dia hanome ny halalin'ny loko 10-bit ary ny famokarana loko 1.07 miliara. Ary koa, ny fanitsiana ny famirapiratanana mandeha ho azy amin'ny Find X2 dia mety hahatratra 4.096 ambaratonga.
Smartphone roa Oppo vaovao no nitsidika an'i Geekbench niaraka tamin'ny Snapdragon 765 sy Helio P90
El Coprocessor OPPO M1 novolavolain'ny tenany, izay chip mifehy ny fanjifana herinaratra, hanomboka amin'ny Find X2. Ny asany lehibe indrindra dia ny fampihenana ny hery lanin'ny fihenam-bidy avo lenta sy ny vahaolana tohanan'ny tabilao sy ny sehatra finday. Snapdragon 865 iza no mitantana ny telefaona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Oppo Find X2: ity no lazain'ny famoahana vaovao sy lehibe momba ny finday
Ity ilay takelaka Lenovo vaovao natomboka tamin'ny Snapdragon 450
Ireo finday avo lenta 10 mahery indrindra tamin'ny Desambra 2019, hoy ny AnTuTu